Sida loo rakibo arjiga gawaarida Motorola Android kasta | Androidsis
[APK] Soo degso oo ku rakib arjiga Motorola gallery jaangooyo kasta oo Android ah
Francisco Ruiz | | Codsiyada Android, Sawir, Motorola
Muddo ka dib adigoon la wadaageynin dhammaan codsiyada aad ka heleysa boosteejooyinka kale ee Android si ku habboon ay u qaadaan bulshada Android si loogu rakibo oo loogu raaxeysto noocyada kale iyo moodooyinka qalabka, maanta, ka dib markii hore loo wadaagay Kumbuyuutarka Xperia Z3 Lollipop, hadda waxaan rabaa inaan isla sidaas ku sameeyo App ga Motorola ee xiisaha leh.
Marka hadda waad ogtahay, haddii aad rabto inaad ku raaxaysato Xarunta Taliska Motorola ama barnaamijka Motorola gallery, caadiga ah ee boosteejooyinka sida Moto X, Moto G o Moto E 2015, Waxaan kugula talinayaa inaad sii wado aqrinta qoraalkan, maadaama aad ku raaxeysaneysid waxaad kaliya soo degsan doontaa feyl fudud oo APK ah iyo uma baahnid inaad raacdo casharro cakiran oo dhalaalaya xitaa ma laha xididkaaga Android xidid.
Sidee waa inaan marwalba ugu mahadnaqnaa dhamaan bulshada Android ee ka dambeysay golaha horumarinta XDA, shaki la'aan waa madasha caalamiga ah ee ugufiican waxkasta oo loola jeedo nidaamyada hawlgalka mobilada.
1 Muxuu noo fidiyaa arjiga cusub ee Motorola gallery?
2 Sideen ku rakibaa barnaamijka Motorola gallery?
Muxuu noo fidiyaa arjiga cusub ee Motorola gallery?
In kasta oo ay tahay goob sawir leh oo u eg wax badan oo ka mid ah waxa sawir-gacmeedka saafiga ah ee Android ay na siiso, arjigan gallery ka ah Motorola gabi ahaanba dib loogu cusbooneysiiyay qaabka Naqshadeynta Maaddada ee loo yaqaan "Android Lollipop" si muuqata u hagaajinaysa muuqaalka diyaarka ah ee kaamerada oo lagu daro waxyaabo cusub sida kala soocida nooca dhacdo iyo waqtiga.
Waxa intaa u dheer cusub app icon, iyadoo la raacayo naqshadeeda loo cusbooneysiiyay Qalabka Naqshadeynta, waxaan sidoo kale heli karnaa isbeddelo xiiso leh sida helitaan deg deg ah oo loogu talagalay shaqeynta sawirrada iyo isbeddelada waxqabadka aadka u wanaagsan ee ka badan qaababkii hore ee arjiga.
Sideen ku rakibaa barnaamijka Motorola gallery?
para rakibi barnaamijka Motorola gallerySidii aan ku soo sheegnay cutubyada ugu horreeya ee qodobkan, uma baahnid terminal hore loo rujiyay ama aad raacdo casharro wax ku ool ah oo adag si aad u iftiimiso nooc kasta oo feyl ah oo nidaamka ah. All inaad sameyso waa Kala soo bax APK-ka isla xiriiriyahan oo ku rakib habka caadiga ah adoo gujinaya ogeysiiska soo dejinta oo dhameystiran. Kahor, sidaad horayba u ogayd, waa inaad haysataa ikhtiyaarka karti u leh amniga, inaad awood u leedahay inaad ku rakibto codsiyo ka baxsan Play Store, ama wixii isku mid ah barnaamijyada laga helo ilo aan la aqoon.
Download- Gallery Motorola APK
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Motorola » [APK] Soo degso oo ku rakib arjiga Motorola gallery jaangooyo kasta oo Android ah
Christian grimberg dijo
Nasiib kuma yeelan fattooga Woo Sp6020 http://t.co/JuUeoIo0IM
Ku soo jawaab Christian Grimberg
Kuma rakibayso Nexus 4.
Ku jawaab Frikineitor
@ ЯDayaanna ™ dijo
Sidoo kale kuma rakibto Nexus 4 5.0.1. http://t.co/o9V9BPheCw
Jawaab @ FЯIҜIИΞIΓФЯ ™
Kuma rakibmi doono Nexus 4
Kuma shaqeynayo nexus 5. Iyadoo 5.1
Andres Guirado dijo
kuma rakibto nexus 6 oo leh 5.0.1 isna ma shaqeeyo
Ujawaab Andres Guirado
Kuma rakibayso Samsung S5.
Ku jawaab lichy
Brian Martinez dijo
Midkoodna s4 oo leh CM 12 5.0.2
Jawaab Brian Martinez
Kuma rakibna Motorola Moto G 2013 oo leh LP 5.0.1 GPE
Aad u fiican, marka laga reebo in aan lagu rakibi karin wax terminal ah android ama ugu yaraan aniga maahan.
Waxaan isticmaalaa Lg G2 mana ii ogolaato inaan rakibo, waxaan rajeynayaa inay jirto xal.
Ku jawaab adalberto
Jose Luis Ces Lameiro dijo
Sikastaba ... Xiriiriyaha ma shaqeynayo, wixii aan aqriyayna, dalabku ma shaqeynayo. Sii wad, saaxiibbo ka samayso. 🙁
Jawaab José Luis Ces Lameiro
Felipe Londoño dijo
ma arko isku xidhka
Jawaab Felipe Londoño
Jordi Cañal Espinosa dijo
Kuma rakibi doono Nexus 5 oo leh Android 5.0.1
Ma waxay tahay inaad wax sameyso si aad u rakibto?
Jawaab Jordi Cañal Espinosa
Kuma shaqeeyaan sony xperia C3
Fernando Gonzalez Monsalve dijo
kuma rakibi doono Sony Xperia Z3 compact
Jawaab Fernando Gonzalez Monsalve
Maalmo ka hor ayaan iibsaday Moto G4 ..
Ma lahan Moto Gallery-ka caadiga ah, waxaan horeyba uga tijaabiyay dhowr dukaan oo ay yihiin xayeysiis saafi ah.
Waa mida kaliya ee aan jeclahay ..
Ku jawaab Nahuel
Sony Xperia Z4 ayaa la soo bandhigi karaa bisha Sebtember
Samsung Galaxy Tab A iyo Tab A Plus ayaa si rasmi ah loo soo bandhigay